Shina: Vitanao ve ry Obama? · Global Voices teny Malagasy
Shina: Vitanao ve ry Obama?
Voadika ny 24 Janoary 2009 3:52 GMT
Nahavita ny fianianany amin'ny mahafiloha Afrikana Amerikana azy voalohany, sy ao anatin'ny fitiavan'ny vahoaka azy indrindra i Obama. Nahavory vahoaka hatramin'ny 2.000.000 moa ny fametrahana azy amin'ny toerany ary tapatapaky ny firefodrefotry ny tehaka sy ny hora-pihobiana tsindraindray eny ny kabariny. Mireondreona avy amin'ny mpanatrika mangoro-potsy ny antsoantso miady rima “O-ba-ma!”, injao mihira sy mandihy ho an'ny mpitondra azy vaovao ao anaty ranomasom-pifaliana ny olona. Fa na dia mbola ao anatin'ny ririnina aza, mikoropadropaka anatin'ny dobon'ny krizy aza, dia nahazo andraikitra anatin'ny fanantenana lehibe sy ny fahefana ny lehilahy, izay heverina ho ny fanovana voalohany indrindra takian'ny vahoaka.
Mahagaga ny maro amin'ny Shinoa indrindra izany.
Tsy mba zava-bahiny aminay (Shinoa) izany, fa mahazatra anay loatra aza. Tsy mbola banga tamin'ity firenena ity na oviana na oviana ny lanonana sy ny fivoriambe hifaliana. Tsy tanan'ny olona intsony fa mahatsiahy ny taona 1960 ny olona raha nilahatra teo amin'ny kianjan'ny Tiananmen ny vahoaka voasasa atidoha anapitrisany, ahitana ny Mpitaritolona Mao manofahofa azy ireo eo amin'ny lampihazo. Niara-niredona hoe “Ho ela velona ny Mpitaritolona Mao!” ny vahoaka, latsa-dranomaso, satria ny ankamaroan'izy ireo, ny nofinofiny lehibe indrindra dia ny hanatri-maso ny mpitarika lehibe indrindra Mao.
Mao sy ny mpanatrika an-tapitrisany
Obama sy ny vahoaka nanatrika azy
Na dia lavitry ny firehidrehetana amin'ny mpitondra aza ny any Shina amin'izao fotoana izao, dia zendana tanteraka amin'ny “firehidrehetan'ny (fanaticism)” Amerikana. Efa mitovitovy amin'ny fanompoana olona ihany, fahazarana mora mamela, fomba voatsikera lalina dia lalina, ampiraisina hatramin'ny ela amin'ny jadona any Shina. Fa inona no nitranga any @ firenena Amerikana demaokraty?
Ao amin'ny Tianya, lahatsoratra iray efa nahazo fanehoan-kevitra takelaka roa no nanainga adihevitra mahaliana momba an'i Obama.
Nanontany i yshocker, miahotra amin'izato hafanam-pon'ny Amerikana:
Tena tsy azoko; mandray ny asany ny filoha vaovao, tsy mbola nahavita na inona na inona akory, nefa dia lasa lalina dia lalina sahady ny fiantraikany! Fampideraderana fotsinyizy ity sa inona koa? Na izany aza dia mamy anie izany teniny izany e, mampilela-molotra aoka izany. Fa manao ahoana ny toetrany e? Tsy fantatra izany!
Avelao-aho-hilaza-zavatra (让我也说几句吧), kosa manambara hoe:
Mirary ho avy mamirapiratra ho azy aho!
Saingy nihomehy azy sy ireo manantena an'i Amerika ho famonjena sy ohatra ho an'i Shina kosa ny AV mpanao gazety (AV记者):
Mitehaka amim-pomba ny sasany rehefa nahavita ny fianianany i Obama, ny sasany kosa nitehaka tahaka ny nahita mpahandro vaovao; Tiana hanako mandrakariva izany isaky ny efa-taona. Fa nahaova inona ho azy ireo ny olona izay nahazo izany tehaka izany nandritra ny taona maro? Tsy misy!
Manondro ny vola anapitrisany dôlara lany nandritra ny lanonana i 八滋 :
Miteny fotsiny aho hoe tsy tena olona mpandanilany i Obama. Mba “namelona afo” fotsiny tamin'ny andro voalohany nandraisany ny asany. Mety hampitombo tsy hita velively ny filan'ny isan-tokantrano ny fandaniana 100.000.000 tamin'ny fotoam-panokafana. Mahomby kokoa noho ny vaovao alefa any @ adiresiny izany “fanalana azy” izany. (fomba fiteny tandrefana ny hoe “mora ny asa am-bava”)
Tokony hianatra an'i Obama ny mpitondra antsika. Manomana fihaonambe sy rindran-kira.
Na dia difotry ny ady sy ny tsy fahombiazan'ny diplaomasia aza ny valo taona nitondran'i Bush, dia maro amin'ny fanehoan-kevitra hita eo amin'ny tabilao no tsy mijery izany fa maneho ny fitokisany sy manana fanantenana @ filoha vaovao. Raha tiana hitsiana avy hatrany, dia fanekena ny tarigetra Amerikana manandratra ny demaokrasia sy ny fahafahana izany.
Hoy ny mpitari-dresaka :
Mieritreritra aho fa ny tarigetra napetraky ny razana (ray na patriarche) nanangana an'i Amerika no fiovana fomba fisainana manantantara sy lehibe indrindra hatramin'izay.
美国建国者的理想之所以可贵，盖因他们宣扬的价值观是符合人性的（没有人喜欢被奴役、被限制自由——贱人除外，呵呵），是 要所有人（或套用时髦的“最大多数人”）幸福而非极少数权贵的骄奢淫逸，是对掌权者憎恶至少是不信任因而必须加以限制的，是符合理性人的追求但同时对理性 抱有适度怀疑的,，所以，除了宗教的固执和非理性的偏见，全世界的人民都能认同。
Sarobidy ireo tarigetra ireo satria mifanaraka amin'ny mahaolona (tsy misy olona te-hoandevozina na manaiky hoteriterena – ankoatra ny olona eo ho eo ihany); Mikaroka ny fifalian'ny maro an'isa izy ireo fa tsy ny tombotsoan'olom-bitsy. Tia mihataka izy ireo, na tsy minomino fahatany farafaharatsiny, izay mitondra sy manapaka aminy mba ho tsy maintsy mipetraka ny arofanina; miara-manaiky izy ireo ny @ fanenjehana ny olona manana fieritreretana (any @ fitsarana), saingy mitana kosa ny fanalefahana ny tsy faneken'ny saina madiorano. Manaiky izany fanambaram-panekena izany ny rehetra ankoatra ny olona nahafahana na tsy misaina.
accq, amin'ny heviny no mamantatra amin'ny alalan'ny kabarin'i Obama, indrindra eo amin'ny toko manazava izany ny antony mampatanjaka ny firenena iray:
Tamin'ny kabarin'i Obama no nilazany fa tsy ny fitaovam-piadiany sy ny sambony no mampatanjaka an'i Amerika, fa avy amin'ny rafi-piaraha-monina mikatsaka ny fahafahana, fitoviana ary ny rariny. Izany no loharanon'ny famoronana. Tsy mahafantatra an'i teboka io anefa ny ankamaroan'ny Shinoa.